IT Staff | Cho Cho Co., Ltd. ﻿
Work location Building (3),Room (6),Myanmar ICT Park (MICT Park),Hlaing Campus,Hlaing Township,Yangon Division
•	Evaluating problematic systems and determining what installation or repair services need to be performed. •	Developing and implementing maintenance procedures. •	Manage, making schedules, assigning work and training employees. Deputy-Supervisor (Engineering)
•	Customer complain များဖြေရှင်းဆောင်ရွှက်နိုင်ရမည်။ •	တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
• Sales Team များကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ • Sales Analysis လုပ်နိုင်ရမည်။ • Sales Team များကို သတ်မှတ်ထားသော Target များ ပြည့်မှီရန် နှင့် တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
• Sales Team များကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ • Sales Analysis လုပ်နိုင်ရမည်။ • Sales Team များကို သတ်မှတ်ထားသော Target များ ပြည့်မှီရန် နှင့် တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • နေပြည်တော်၊ပြည် နှင့် မကွေးမြို့နယ်များတွင် တာဝန်ထ ...
•	Cho Cho Company Limited မှ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး Marketing ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်သော Marketing Staff များလိုအပ်ပါသည်။
•	သွက်လက်ဖျတ်လတ်ရမည်။ Cho Cho Company Limited တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	လှိုင်မြို့နယ် (MICT) Park တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Yathar Cho Industry Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	စကားအပြောအဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ Driver (Sales) Yathar Cho Industry Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	အဆိုင်းဆင်းနိုင်ရမည်။ •	မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Supervisor (Engineer) Yathar Cho Industry Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရပါမည်။ •	လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ Staff (QA) CHO CHO INDUSTRY LTD တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ CHO CHO INDUSTRY LTD တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ Assistant Supervisor For Store CHO CHO INDUSTRY LTD တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	ဘွိုင်လာသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ •	လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်နှင့် မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အဆိုင်းဆင်းနိုင်ရမည်။ Staff For Boiler Department CHO CHO INDUSTRY LTD တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန ...
•	လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်နှင့် မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အဆိုင်းဆင်းနိုင်ရမည်။ Staff For Engineer Depatment CHO CHO INDUSTRY LTD တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ Deputy Manager	(Admin) CHO CHO INDUSTRY LTD တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်နှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အဆိုင်းဆင်းနိုင်ရမည်။ •	လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်နှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်နှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	CHO CHO Industry LTD တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	CHO CHO Industry LTD တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Deputy Manager (Human Resource)
•	လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	CHO CHO Industry LTD တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	MICT Park (လှိုင်မြို့နယ်) တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ နယ်ရုံးခွဲများသို့ ခရီးထွက်နိုင်ရမည်။ •	Cho Cho Company Limited တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Deputy Manager (Human Resource)
•	အဆိုင်းဆင်းနိုင်ရမည်။ •	မင်္ဂလာဒုံ စက်မှုဇုံ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Yathar Cho Industry Limited တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	မင်္ဂလာဒုံ စက်မှုဇုံ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Yathar Cho Industry Limited တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	Documentation ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် Instruction ပိုင်းသိရှိ၍ Management လုပ်နိုင်ရမည်။ •	မင်္ဂလာဒုံ စက်မှုဇုံ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Yathar Cho Industry Limited တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Deputy General Manager (Engineering)
•	Can be able to handle the procurement process. •	The company needed equipment necessary to be able to fill the time line. •	Can communicate with external agencies and government. •	To audit major external suppliers. •	Can be able to evaluate performance for major external suppliers. •	If supplies are not matched according to standards, inform back to external suppliers. •	For taking above responsibilities, follow below duties exactly. •	Implementing SOP Procedure . Purchase/ Procurement Manager
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Quality Control/Quality Assurance Staff
•	Develop eye catching designs, graphics and layouts for products illustrations, company logos, website and advertisement •	Handle social media account •	Develop design for promotions and edit pictures to upload on website and social media •	Collaborate with marketing and sales team to develop campaigns •	Carry out additional projects and duties as needed •	Design pamphlets and design for new products launch
IT Staff IT/Computing Jobs Joblesssssssssssssss JobsInYangon Cho Cho Co., Ltd. IT/Computing Jobs IT/Computing Jobs IT Staff Jobs in Myanmar, jobs in Yangon